Alteryx: ọgụgụ isi nke azụmahịa na akwụkwọ nyocha | Martech Zone
Thursday, June 14, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Mgbe ndị bekee na-ekwu okwu nchịkọta, ọ na-adịkarị nanị na saịtị, ọkọlọtọ data na-adịkarị ofụri a ọnụ ọgụgụ nke na-ere. Maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere terabytes nke data - gụnyere data ịzụta ndị ahịa, data ọnụọgụ, data ala, data mgbasa ozi mmekọrịta, wdg. nchịkọta ikpo okwu anaghị arụ ọrụ. Nke a bụ nnukwu mkparịta ụka dị n'etiti Alteryx na Forrester's Boris Evelson na isiokwu:
Alteryx jikọtara ọgụgụ isi azụmahịa na ikike ijikọ na datamarts buru ibu n'ime ihe ha kọwara dị ka nhazi usoro.
Izu gara aga, enwere m mkparịta ụka mara mma na isiokwu ahụ na Paul Ross, VP nke Ahịa na Ahịa Ahịa na Alteryx. N'ime ọrụ azụmaahịa nchekwa data m gara aga, ahaziri m ma wuo ụlọ nkwakọba data ahịa maka ndị ahịa ma ghọta ihe ịma aka ndị ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ewe anyị ọtụtụ ụbọchị iji were terabyte data. Alteryx na-ejikwa ọrụ ndị siri ike dịka nke a na njem, na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ na teknụzụ nchekwa data.
Alteryx jikọtara atụmatụ niile nke ngwaọrụ nkwakọba data na nke oge a nchịkọta na ngwaọrụ mmekọrịta iji nye echiche zuru oke nke data gị - gụnyere mmịpụta, mgbanwe na ibu (ETL), data na adreesị adreesị, ntinye data data ndị ahịa, mkpakọ data na ntinye aha, ịkọ akụkọ na nyocha gbasara ohere.
Alteryx: Needkwesiri inyocha data gị n'akụkụ ihe ndị dị mkpa dị na mpụga-dịka ụlọ, asọmpi, psychographics, na geo-location. Ha niile jikọtara, ọgụgụ isi azụmaahịa a nwere nghọta nchịkọta nye gị ihe ịchọrọ iji weghara ohere ị ga - eji nweta ahịa, gafee ndị asọmpi gị, ma chụpụtakwu ego site na azụmaahịa gị ugbu a.
Ma nke ahụ bụ ebe Alteryx dabara. Alteryx Strategic Analytics sọftụwia bụ ngosiputa desktọọpụ-ruo-igwe ojii zuru oke nke jikọtara data azụmaahịa, ọdịnaya ụlọ ọrụ, yana nhazi ọnọdụ ohere iji nye ndị nhazi atụmatụ ihe niile ha chọrọ n'otu, ngwọta dị mfe iji. Ọ bụ otu isi gị maka usoro nchịkọta ngwanrọ, data, na nyocha, na-ewepụta ọgụgụ isi azụmaahịa nchịkọta ịkwesịrị ịme mkpebi siri ike, nke ị maara nke ọma.
Ad hoc nyocha na nkeji: Chepụta ma rụzigharịa ndapụta na ijiji.
Eserese mmekọrịta na maapụ: Chọpụta mmekọrịta ọhụrụ na ohere.
Nyocha gbasara ohere: Gwuo ala zuru oke na gburugburu ala.
Ozi zuru oke na nhọrọ nnyefe: Nye nghọta otu ị chọrọ.
Onye na-ewu ngwa: Mepụta na kesaa ngwa nyocha na onye ọkachamara ịdọrọ na dobe.
Mgbanwe ngwa: Nweta a jumpstart na prebuilt ngwa ọdịnala si Alteryx Community.
N'ime ụlọ ahịa na ọtụtụ ahịa, otu ụlọ ahịa Alteryx jiri Facebook 'Mmasị' iji bulie nyocha nkewa ndị ahịa ya. N'iji Alteryx, ụlọ ọrụ ahụ dabara nke ọ bụla 'Dị ka' na ibe Facebook ya na ọrụ ndị ahịa na mmemme iguzosi ike n'ihe ya, ma nyochaa omume ịzụta ndị ahịa. N'iji usoro nyocha, nyocha (ma ọ bụ ọnọdụ) nyocha, na data igwe mmadụ, onye na-ere ahịa nyochaa mmekọrịta ndị ahịa Facebook na njikọ kpọmkwem na ahịa dị elu na nke ọ bụla n'ime ndị ahịa ya na ụdị ngwaahịa ya.
Jikọtara ya na ndị ahịa dị n'ime ma ọ bụ data ahịa, yana data igwe mmadụ dị na mpụga, Alteryx na-enye ụlọ ọrụ ike ịghọta n'ụzọ doro anya etu mbọ mgbasaozi mmekọrịta ha na itinye ego ha siri metụta omume ndị ahịa, ma nke kachasị mkpa bụ ala ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ụfọdụ ngwaọrụ Alteryx site na weebụ - lelee aka ha nchịkọta wizards ị nwere ike iji n'efu na ha Alteryx Ugbu a saịtị. Ihe ntaneti Twitter ha mara mma nke ukwuu, na-eweghachite ndepụta nke tweets metụtara na isiokwu ọchụchọ, yana ozi profaịlụ tweeter. I nwekwara ike tinye adreesị na Twitter ID maka ụfọdụ ezubere iche!
Tags: alteryxwdgdata alageotargetingakukodata ohere
Gịnị bụ Kachasị Nnweta Shozụ ahịa Njin?